Top 8 website đặt tour du lịch giá rẻ uy tín nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 8 website đặt tour du lịch giá rẻ uy tín nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 website đặt tour du lịch giá rẻ uy tín nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Njengamanje, ukuhamba ngokuvakasha kuwuhlobo olukhethwa ngabantu abaningi. Ngaphezu kwalokho, ziningi Iwebhusayithi yokubhuka yokuvakasha eshibhile udumo futhi. Sicela ubhekisele kumawebhusayithi okubhukha angu-8 athenjiwe futhi akhethwa amakhasimende kakhulu!
A/ I-TOP PRESTIGE CHEAP WEBSITE YOKUBHEKA
1. Iwebhusayithi yokuvakasha mytour
I-Mytour, egama layo eliphelele i-Mytour Vietnam Co., Ltd., iyiwebhusayithi eyasungulwa cishe eminyakeni eyi-7 edlule, kusukela ngo-Okthoba 2012. I-Mytour ikunikeza ngezinsizakalo zokubhuka zasekhaya nezamazwe ngamazwe, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokubhukha amahhotela ngamahhotela angaphezu kuka-5000 eVietnam naphesheya. Amasistimu wamahhotela asuka kwenkanyezi engu-1 kuye kweyi-5 ahlala acwaningwa kahle yi-mytour futhi ikulethela amahhotela aphambili, esimanje futhi afaneleka kakhulu.
Ayisekeli nje kuphela ukubhukha ukuvakasha, ukubhukha amahhotela, le webhusayithi iphinde ikunikeze ngesevisi yokubhuka amathikithi endiza eku-inthanethi. Ngakho-ke, udinga kuphela ukukhetha ikheli ofuna ukuya kulo, kanye nokubhuka amathikithi endiza, vumela i-mytour ihlele, i-mytour isebenzisane nezindiza eziningi ezinkulu ezifana ne: Vietnamairline, Vietjet, Jetstar…
I-Mytour enezinhlelo eziningi zokukhuthaza, amakhodi esaphulelo namanani aphansi kanye nezindlela eziningi zokukhokha ezivumelana nezimo, izokulethela okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu nomndeni wakho, abangani nozakwenu.
Isiqinisekiso senani esingcono kakhulu
Intengo engcono kunokuvakasha kokubhuka, ukubhuka okuqondile
Abeluleki bezisebenzi ohambweni lokubhuka, banomdlandla wokubhuka, banesipiliyoni seminyaka eminingi, basekela amakhasimende phakathi nokuvakasha.
Kukhona ukukhushulwa okuningi kanye amaphuzu ukunqwabelana
Siza amakhasimende ethuthele esikhumulweni sezindiza, ehhotela…
Ukubuyiselwa kwemali okuqinisekisiwe kwamakhasimende uma lolo hambo lunezinkinga…
Kunokuvakasha okuningi ongakhetha kukho
Bhuka izinkambo namathikithi endiza ngokushesha ngentengo engcono kakhulu
Intengo esohlwini isephezulu uma kunekhodi yesaphulelo noma iphromoshini
Kwesinye isikhathi akunconyelwa ukukhetha phansi ngombono omuhle njengalapho ubhukha ngqo
2. Viettravel – Iwebhusayithi ehamba phambili yokubhukha ukuvakasha eVietnam
I-Viettravel yinkampani yezokuvakasha eyasungulwa ngo-December 20, 1995, kudala futhi ingenye yamawebhusayithi ahloniphekile asekela amakhasimende ohambweni lokubhuka.
Eminyakeni engaphezu kwengu-20 yokusungulwa nokuthuthukiswa, i-Viettravel isekele izivakashi eziningi ohlelweni lokukhetha kanye nokuvakasha kokubhuka. Njengoba kunamagatsha angaphezu kweshumi nambili ezweni kanye namahhovisi amele amazwe ngamazwe, le webhusayithi iyaziqhenya ngokuba isiza sokubhukha esikahle kakhulu. I-Viettravel yiwebhusayithi eshibhile yokubhuka ukuvakasha ehlala iphakamisa indima yezivakashi futhi isevisi yamakhasimende ingaphezu kwakho konke.
Abasebenzi abalalelisisayo nabanomdlandla, ukunakekelwa kwamakhasimende
Imikhiqizo yokuvakasha ehamba phambili ehlukahlukene futhi ekhangayo eVietnam
Ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ayisizinda sayo yonke imisebenzi yebhizinisi i-Viettravel ehlose kuyo.
Ubungcweti kuyisinyathelo sokuqinisekisa ikhwalithi nesithunzi seViettravel
Amaphromoshini esaphulelo anomkhawulo.
Intengo esohlwini iphezulu kunangaphambi kokuthi kufakwe ikhodi yesaphulelo. Ngakho-ke ungakhohlwa ukuya esihlokweni ukuze ufingqe amakhodi esaphulelo e-Vietravel ashisa kakhulu ukuze uthole ikhodi ngaphambi kokukhokha!
3. I-Klook – Indawo eshibhile yokubhuka yokuvakasha, ukubhukha ithikithi lokuvakasha oziqondisayo nokunye okwengeziwe
I-Klook Travel iyinhlangano enkulu e-Asia, enekomkhulu emazweni amaningi amakhulu njenge-Singapore, Thailand, Hong Kong, Korea, Japan… Amasevisi e-Klook ahluke kakhulu njengokuthi: amathikithi okubhuka, amathikithi okungena emapaki okuzijabulisa izindawo ezidumile, bhukhela amathikithi endiza eshibhile ezivakashini, bhuka ibhasi elisuka ezindaweni liya esikhumulweni sezindiza futhi ngokuphambene nalokho. Ngaphezu kwalokho, i-Klook iphinde isekele ukubhuka amathikithi ebhasi ezindaweni eziningi ezikhangayo. Ngokuvamile, ukuza e-Klook, uzojabulela izinsizakalo zokuhamba ezidingekayo kakhulu.
Unga-oda ukuvakasha ngakunye ngokuya ngokuthanda kwakho futhi uhlele ishejuli yakho, hhayi ngokuya ngohambo olukhulu njengamanye amawebhusayithi okubhuka. Ngakho-ke, uzosebenza ngesikhathi sakho, ngaphandle kokukhathazeka ngokuvuka ngesikhathi futhi uye endaweni efanele.
Ngokuzihlela wena, uzokonga imali lapho ukwazi ukubala isamba sezindleko zohambo onganquma ngazo ukuthi uzochitha ini, nokuthi yini ongayisebenzisi.
Ukuvakasha uwedwa akufani nokuthatha uhambo lokupakisha noma ukuzihambela wedwa. Le sevisi izokongela isikhathi sokuthola indlela yokuhamba ngoba ukuvakasha kunakekela yonke into. Udinga nje ukusebenzisa imali ukuze ubhukhe ukuvakasha futhi ugxumele emotweni, ujoyine uhambo lwesipiliyoni.
Awudingi ukulungisa amaphepha angcolile uma ungafuni. Ngoba nge-Klook, udinga nje ukunikeza ikhodi yokuqinisekisa ukubhukha futhi kulungile. Into kuphela oyidingayo ifoni ukuze idivayisi ihlole ikhodi.
Uhambo olunezinhlelo zezimoto ezihlukene ngalunye lunefulegi elibonakalayo
Isevisi yokubhukha imoto igcina isikhathi kakhulu futhi isesimweni. Umshayeli uze akhumbuze abagibeli ngomdlandla ukuthi imoto igijima ngasiphi isikhathi ukuze iye endaweni entsha.
I-Klook nayo inohlelo lokwethembeka kumakhasimende. Ngokukhethekile, ngemva kwesevisi ngayinye ebhukhwe ku-Klook, uzoklonyeliswa ngephoyinti elingu-1 elihambisana nezindleko. Uma ubuyekeza isevisi esetshenzisiwe, uthola amaphuzu engeziwe angama-50. Amaphoyinti aqoqiwe azosetshenziswa ngesikhathi esilandelayo lapho u-oda ezinye izinkonzo. Ngaleyo ndlela uzokonga kakhulu!
Ngaphandle kwalokho, i-Klook inamakhodi amaningi esaphulelo nokukhushulwa. Ungabuyekeza lapha!
Izinga lesevisi e-Klook laziswa kakhulu amakhasimende njengokuthi “CANCEL TOUR”. Uma kunesizathu esizwakalayo, ungathintana no-Klook ngokuqondile ukuze ukhansele, bazobuyisela yonke imali oyidlulisile ngaphambilini futhi banikeze imininingwane NGENQUBO YOKUBUYISELA KU-Klook, isikhathi Singakanani isikhathi sokubuyisela? Konke kulula kakhulu, kucacile, kuchwepheshe, ikakhulukazi i-MIND.
Eqinisweni, akuwona wonke amasevisi azobuyiselwa uma ukhansela. Ngakho-ke, udinga ukuthola mayelana nokuvakasha noma isevisi ngayinye ngaphambi kokubhuka!
Amanye amasevisi ngeke atholakale uma isikhathi osibhukhile siseduze kakhulu. Lokhu akuyona into embi ngempela, kodwa ngisayibeka ukuze abantu babe nombono oqondile. Kufanele uhlole kuqala ukuze wenze uhlelo oluphusile.
4. Imisebenzi yezokuvakasha yenkampani i-Ben Thanh – isivakashi sika-Ben Thanh
I-Ben Thanh Tourist ingelinye lamawebhusayithi okubhukha ukuvakasha ashibhile anedumela elihle nelisezingeni elaziwa kuleli nakwamanye amazwe namuhla aneminyaka engu-28 yesipiliyoni embonini. Lena iwebhusayithi ezokusekela ohambweni lokubhuka, amathikithi endiza asekhaya nawamazwe ngamazwe ngokushesha futhi ngamadili angcono kakhulu!
Ziningi izinkambo zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezikhangayo
Kunamaphakheji amaningi ancamelayo amakhasimende
Abasebenzi abanobungane, isevisi yamakhasimende elalelayo
Intengo esohlwini ngaphandle kwesaphulelo iphezulu kancane
Divui iyisizindalwazi esihlinzeka ngezinsizakalo zokubhukha amathikithi okubuka, izinkambo kanye nayo yonke imisebenzi ehamba phambili yokuhamba ezindaweni ezithandwa kakhulu e-Asia kumakhasimende afuna ukuzihambela. Uma ungumuntu othanda ukuhamba ngaphandle kokucindezelwa yisikhathi, ufuna ukuhlola izindawo ezikhanga izivakashi eziningi, i-Thi divu yiwebhusayithi yomngane wakho. Divui izokusiza ekubhukheni amathikithi kanye nasemahhotela. Lona umehluko we-Divui uma uqhathaniswa namanye amawebhusayithi okubhukha ukuvakasha.
Ifanele labo abafuna ukuhamba ngokuzimela, abafuni ukukhawulelwa ngesikhathi
Kukhona amaphromoshini amaningi amakhasimende
Kunzima ukuphatha ngoba yizokuvakasha ezizimele
6. Iwebhu yokubhuka izinkambo ezishibhile Tugo
Juni 2015, Tugo wangena ngokusemthethweni embonini yezokuvakasha ngesiqubulo esithi ‘amakhasimende anganelisekile, isiqinisekiso sokubuyiselwa imali’. Kuze kube manje, uTugo uneminyaka engaphezu kwengu-3 yesipiliyoni embonini, uTugo waziwa ngokuhlela ngempumelelo ukuvakasha emazweni angaphandle.
Kunokuvakasha okuningi okushibhile amakhasimende angakhetha kukho
Abasebenzi abalalelisisayo nabanakayo
Inani elincane labasebenzi
Akwaziwa kabanzi okwamanje
7. Indawo ye-E-commerce i-Adayroi
Kuwebhusayithi yokubhuka yokuvakasha eshibhile ephezulu enedumela elihle, i-Adayroi nayo igama elijwayelekile. I-Adayroi isiza se-e-commerce esabalalisa izinto ezahlukahlukene okuhlanganisa nokuvakasha. I-Adayroi ixhunywe ngokuqondile ne-Vingroup, ngakho ungaqiniseka lapho ubhukha ukuvakasha.
Inzuzo yokubhukha ukuvakasha e-Adayroi ukuthi intengo iyathengeka, ziningi izinkambo zasekhaya nezamazwe ngamazwe. Ngaphezu kwalokho, i-Adayroi inamakhodi amaningi esaphulelo ukusiza abasebenzisi ukuthi bathenge amavawusha okuvakasha ngentengo eshibhe kakhulu! Ingasaphathwa eye-Adayroi izophinde isekele amakhasimende ukuthi athenge ngezitolimende futhi aqongelele amaphuzu e-VinID – leli phuzu lingasetshenziswa kulo lonke uhlelo!
Kodwa-ke, i-Adayroi iyinkundla yokuhweba yezinkampani zokuhamba ukuze zithengise imikhiqizo yazo. Ngakho-ke, izigaba zokubonisana nokuphendula zamakhasimende zisanqunyelwe.
8. Ukuhamba ngewebhu, inkampani yezokuvakasha FIDITOUR
I-Fiditour ikalwe njengenye yezinkampani zokuhamba Eziphezulu kumawebhusayithi ashibhile okubhuka okuvakasha eVietnam. Uma ngaphambili, i-Fiditour ihlelele kuphela izinkambo zezivakashi zakwamanye amazwe eziya eVietnam, manje, i-Fiditour ihlale isungula futhi yathuthukiswa, ihlinzeka ngezinhlobo zebhizinisi ngemikhiqizo, izinsizakalo ekhaya naphesheya.
Ngaphezu kokuvakasha, i-Fiditour iphinde isekele amakhasimende ukuthi abhukhe amathikithi endiza ashibhile, amakamelo amahhotela ashibhile, amavawusha okudla nokuzijabulisa ezindaweni. Ngokujwayelekile ukuza ku-Fiditour awudingi ukukhathazeka nganoma iyiphi inkinga.
B/ ishibhile UMUZI WOKUBHEKA
Ukuze ukwazi ukonga izindleko zokuhamba futhi ube nakho okukhumbulekayo, udinga ukuqaphela ngokushesha isipiliyoni sokuzingela izinkambo ezishibhile esihlokweni esingezansi:
1. Hamba ukuvakasha kweqembu noma inhlangano
Ukuthatha uhambo lweqembu, inhlangano yakho izokonga inani elikhulu lemali ngoba izinkampani zezokuvakasha zivame ukuba nezikhuthazo eziningi zokuthi izivakashi zibhukhe uhambo lwamaqembu. Ingasaphathwa eyokuthi leli futhi kuyithuba lokuhlanganisa amalungu eqembu ndawonye!
2. Bhalisela ukuvakasha kusenesikhathi
Eqinisweni, izinkampani eziningi zokuhamba zinikeza izikhuthazo kumakhasimende abhalisa kusengaphambili. Ngaphezu kwesaphulelo, izinkampani ziphinde zinikeze izipho eziningi kumakhasimende abhalisele ukuvakasha kusenesikhathi. Ikakhulukazi ngesikhathi samaholide, ukuze ugweme ukuphelelwa izihlalo futhi uthole amanani akhethekile kanye nezinsizakalo zokunaka, zinikeze inketho ephephile ngokubhalisa kusenesikhathi.
3. Ukuvakasha ngomzuzu wokugcina
Kunamanye amawebhusayithi afana ne-Vietravel anezipesheli zokuvakasha ezithile zomnqamulajuqu. Bhukha ukuvakasha ngalesi sikhathi, intengo izovame ukwehla kakhulu! Kodwa-ke, kufanele futhi ucabangele intengo yegumbi lehhotela! Bhukha ngezikhathi eziphakeme kakhulu, amanani ekamelo azoba phezulu ngisho noma engekho amagumbi.
4. Khetha inkampani enedumela elihle, iwebhusayithi yokubhuka yokuvakasha eshibhile
Izinkampani ezinkulu, ezihloniphekile nezidumile zizoba nokuvakasha kwekhwalithi ngamanani athengekayo. Ngokuvamile ngeke kudingeke ukhathazeke nganoma yiziphi izinkinga phakathi nohambo. Hhayi lokho kuphela, lolu hambo ngeke lube nezindleko ezengeziwe.
Sethemba ukuthi ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi uthole eyodwa Iwebhusayithi yokubhuka yokuvakasha eshibhile, enekhwalithi enhle ikusize ube nohambo olunezinto eziningi ezinhle!
18 cách chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả nhất không dùng đến thuốc | Muasalebang